HCC : “Tsy mahazo kopian’ny fanambaram-pananana ny Bianco” | NewsMada
HCC : “Tsy mahazo kopian’ny fanambaram-pananana ny Bianco”
Par Taratra sur 08/08/2016
Tsy araka ny lalàmpanorenana ny And. 9 amin’ny lalàna lah. 2016-020 momba ny ady amin’ny kolikoly, araka ny fanapahan’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC), ny 5 aogositra, ao amin’ny “site web“.
Ny And. 2 amin’io lalàna io milaza ny And. 40 sy 41 amin’ny lalàmpanorenana ny hametrahana ny fanambaram-pananana sy ny tombontsoa ara-toekarena amin’ny HCC, ary misy dika mitovy alefa any amin’ny Bianco.
Milaza ny HCC fa mametraka fanambaram-pananana manoloana ny HCC ireo sokajin’olona voalazan’ny andalana etsy ambony alohan’ny hanatontosana ny asa na iraka sy hisahanana ny andraikiny, araka ny And. 41 amin’ny lalàmpanorenana.
Tsy milaza izany lalàna fototra izany amin’ny handefasana dika mitovy ny fanambaram-pananana amina rafitra hafa. Noho izany, tsy araka ny lalàmpanorenana ny fandefasana dika mitovy izany any amin’ny Bianco.
Tsy azo aato amin’ny asany izay tsy voaheloka
Araka ny And. 9 voalazan’io lalàna io ihany, aato amin’ny asany na ny fe-potoam-piasany mandra-pivoahan’ny fanapahan-kevitra faran’ny fitsarana ny olom-panjakana rehetra, voalazan’ny andininy voalohany amin’io lalàna io, na eo aza ny ny fiheverana azy ho tsy mbola meloka.
Voalaza koa fa tsy azo tendrena amina toeran’andraikitra intsony ireo olom-panjakana izay mahazo tombony amin’ny famotsorana azy na afaka noho ny fisalasalana amin’ny fanapahan-kevitra faran’ny fitsarana.
Nefa ho an’ny olom-pirenena rehetra tsy misy fepetra ankoatra ny fahafaha-manao sy ny fahaizana ny fidirana amin’ny asam-panjakana, araka ny And. 27 amin’ny lalàmpanorenana. Ary heverina ho tsy manan-tsiny ny voampanga sy voarohirohy rehetra mandra-pisian’ny didim-pitsarana raikitra manameloka azy, araka ny And. 13. Noho izany, tsy afaka ny zon’ny tsirairay amin’ny fahazoana miditra ho mpiasam-panjakana, raha tsy misy didim-pitsarana manameloka azy.
Ankoatra ireo, nasian’ny HCC fanamarihana ny And. 19, 24, 25 ary 26 amin’io lalàna io. Araka ny lalàmpanorenana ny lalàna laha2016-021 momba ny fitsarana manokana iadiana amin’ny kolikoly na ny Pôles anti-corruption (Pac).